क्वारेन्टाइन डर कि भर - Pradesh Today
Homebreaking-newsक्वारेन्टाइन डर कि भर
घोराही, १८ जेठ । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ का दिपक वली दार्जलिङबाट दाङ आएको दशौं दिन भयो । उनी अहिले न्वारेन्टाइनमा छन् । उनीसँगै बसमा आएका दर्जनौ पनि क्वारेन्टाइनमा नै छन् ।
उनलाई घरमा नलगरै घोराही–११ कै शिवपुर स्कुलमा क्वारेन्टाइनमा लगियो । उनीसँगै १७ जना छन् । तर उनी क्वारेन्टाइनमा आफूलाई सुरक्षित भएको महसुस गर्दैनन् । सबैजना एउटै क्वारेन्टाइनमा रहने र सरसफाईको व्यवस्था नहुँदा असुरक्षित भएको महसुस गरेको बताउन थालेका छन् ।
‘सबैले प्रयोग गर्ने शौचालय एउटै छ, खानेपानीको पाइप पनि हामी सबैले एउटै प्रयोग गर्दै आइरहेका छौं’ उनले भने ‘हामीमध्ये कसैलाई संक्रमित भएको रहेछ भने सबैसम्म पुग्ने निश्चित छ । घरको सदस्यहरूले पालैपाले खाना ल्याईदिएर आउँछन्,
कतै उनीहरू पनि संक्रमित हुने हुन कि भन्ने डर लाग्छ’ उनले भने । सुत्नको लागि मात्रै दूरीको व्यवस्था गरेपनि अन्य सुविधा नभएको उनले बताए ।
बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नं. २ का गौरव विश्वकर्मा पनि आफ्नो गाउँ आएको आज सात दिन पुग्यो । उनी भारतको राजस्थान–उदयपुर हुँदै आएका हुन् । उनी अहिले बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नं. २ बढी पोखरास्थित कालिका प्रावि स्कुलमा क्वारेन्टाइनमा छन् ।
‘क्वारेन्टाइनमै हामीलाई एक अर्काप्रति डर त्रास भइरहेको छ’ विश्वकर्माले भने ‘एउटा क्वारेन्टाइनमा धेरै संख्यामा छौं ।’ं सबैजनालाई छुट्टाछुट्टै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न त सकिन्न तर सरसफाई र व्यवस्थित त गर्न सकिन्छ नि’ उनले थपे । सामाजिक दूरीको व्यवस्था गरेपनि पानीको धारा एउटै, शौचालयको व्यवस्था नभएको उनले बताए ।
‘क्वारेन्टाइनमा आउँदा ल्याएको स्यानिटाइजर, मास्क सकियो’ उनले भने ‘वडाले साबुन दिएको छ, स्यानिटाइजर दिएको छैन ।’ कसैले कसैलाई नछोएपनि ठूलो हुल भएकाले डर भएको उनले बताए । ‘शुरूमा आउँदा ज्वरो नापेका हुन, त्यसपछि कोही आएका छैनन्’ उनले भने ‘धेरै संख्यामा छौं, समय–समयमा आउने व्यवस्था मिलाएको भए हुन्थ्यो ।’
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ का बोधीराम चौधरी १२ दिनदेखि गोग्ली स्कुलमा क्वारेन्टाइनमै छन् । शुक्रबार मात्रै पिसिआर चेक भएको उनले बताए । भारतको डिल्लीबाट उनी सिधै स्कुलको क्वारेन्टाइनमा आएर वसेका हुन् ।
उनीसँगै त्यो स्कुलमा १ सय १० जना भारतलगायत जिल्ला बाहिरबाट आएर क्वारेन्टाइनमा आएर बसेका छन् । उनलाई खान र बस्नको लागि समस्या छैन । तर उनलाई पनि त्यो ठूलो हुलको डरत्रास छ ।
‘खान बस्नको समस्या छैन, सामाजिक दूरीको नियम पनि हामीले पालना गरेका छौं’ उनले भने ‘हामी धेरै संख्यामा छौं, हुलमा बस्न हुन्न भन्छन्, कता–कता डर लागिरहेको छ ।’
जिल्ला बाहिर तथा भारतबाट आउनेको संख्या बढ्दोक्रममा छ । तर उनीहरूलाई राख्नको लागि व्यवस्थित गरिएको छैन् । बाहिर जिल्लाबाट आएकाहरूको लागि सामुदायिक विद्यालयमात्र प्रयोग गरिएको छ । विशेषगरी भारतबाट आउनेको संख्या पनि बढी छ ।
अधिकांस भारतबाट आउने पनि ग्रामीण भेगका नै छन् । अनि सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक सुविधा सम्पन्न पनि छैनन् । ‘जतिजना आउँछन्, सामुदायिक विद्यालयमात्र प्रयोग गरिएको छ’ बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नं. २ का स्थानीयबासी बलदेव मल्लले भने ‘क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि पनि त्रास नै छन् ।’
‘एउटै क्वारेन्टाइनमा धेरै संख्या राख्दा झनै कोभिड–१९ को जोखिम हुन्छ’ घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ का स्थानीयबासी कमल गौतमले भने ‘क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नमिलाउने, आए जतिलाई एउटा राख्नु ठिक होइन् ।’ क्वारेन्टाइनमा राखिएका आफन्तहरूलाई खानेकुरा लगेर जाँदा पनि परिवारमा जोखिम हुने गरेको उनले बताए ।
कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले दाङमा ८ हजार भारतबाट आउन सक्ने आँकलन गरेपनि एकीन तथ्यांक भने छैन । कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले सबै पालिकाहरूमा क्वारेन्टाइनको संख्या बढाउन अनुरोधसमेत गरेको छ ।